झुलाघाट नाकाबाट पाँच हजार नेपाली फिर्ता - दैनिक नेपाल न्युज
शनिबार, अशोज ९, २०७८ | Saturday 25th September 2021
प्रकाशित द्वारा: शुक्रबार, असार ४, २०७८
बैतडी, ४ असार: कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाकाबाट साढे चार हजार नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् । गत वैशाखदेखि हालसम्म चार हजार ६२६ जना स्वदेश फर्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार बैतडीका दुई हजार २४०, बझाङका एक हजार ६६१, डडेल्धुराका १०१, दार्चुलाका २७, डोटीका २५, अछामका पाँच तथा बाजुराका १२१ नेपाली झुलाघाट नाका भएर स्वदेश फर्किएका हुन् ।
यस्तै कैलालीका ५३, कञ्चनपुरका ३०, हुम्लाका ६४, मुगुका ६० र जुम्लाका ४० जना पनि झुलाघाट नाका भएर फर्किएको बताइएको छ । नेपाल भित्रिनेमा अधिकांश भारतमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि रोजगारी गुमाएर फर्किएका नागरिक छन् । भारतबाट फर्किरहेका नागरिकको सीमामै हेल्थ डेस्क स्थापना गरी एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बैतडीमा असार १५ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
नयाँ सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या शून्य: बैतडीमा शुक्रबार नयाँ कोरोना सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या शून्य रहेको छ । शुक्रबार गरिएको परीक्षणमा कुनै नागरिकमा पनि कोरोना नेदेखिएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा १०७ जनाको परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालयका सीआइसीटी सहजकर्ता विनिता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । बुधबार पनि ४४९ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । बैतडीमा परीक्षण तीव्ररूपमा भइरहेको छ ।
जिल्लामा सङ्क्रमण दर घट्दै गएको छ । अहिले बैतडीमा १३२ कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये १३१ जना बैतडीका रहेका छन् भने एक जना अन्य ठाउँका रहेका हुन् । कोरोनाकै कारण बैतडीमा हालसम्म १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । (रासस)
मृ’त’क सेजलको कोठामा पस्न न’सकिने अवस्था, कोठा भित्र देखियो यौ’नज’न्य सामाग्री, सि’रिन्ज र बिभिन्न ला’गु औ’ष’ध (भिडियो सहित)
१४ वर्षदेखि फ’रा’र अ’भियुक्त सार्वजनिक
बागलुङको बलेवामा नगर अस्पताल संचालन
पर्वत, ८ असोज: पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजार सँगै जोडिएको बलेवा क्षेत्रमा नगर अस्पताल संचालनमा आएको छ । बागलुङ नगरपालिकाका तीन वटा वडाका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्धेश्यले नगर अस्पताल संचालनमा [...]
बिहान खाली पेटमा खाने गर्नुस् यि चिज स्वास्थ्यमा हुनेछ लाभै लाभ !
एजेन्सी । बिहान खाली पेटमा भिजाएको किसमिस खानाले निकै फाइदा हुन्छ । किसमिसमा पोषण तत्व भरपुर पाइन्छ । सेतो भेली पनि लाभ दाइक मानिछ । हल्का पनि राखेर भेली खादा [...]
अनुहारमा चमक ल्याउन के गर्ने ? जानी राखौँ
एजेन्सी । आफु सुन्दर हुन जसलाई पनि मन लाग्छ । अनुहारमा चमक ल्याउन संतुलन खान जरुरी छ । संतुलन आहार भन्नाले के हो भने पोषण तत्वो भएको खाने कुरा खान [...]
स्यानिटरी प्याड बारे बोल्यो अर्थमन्त्रालय
काठमाडौँ । सरकारले स्यानिटरी प्याडमा कुनै पनि कर वृद्धि नगरेको स्पष्ट पारेको छ । महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर [...]
८६ वर्षीया वृद्धाको पहिलो पटक धौलागिरि अस्पतालमा जोर्नी प्रत्यारोपण
गलकोट । बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा पहिलोपटक ८६ वर्षीया वृद्धाको जोर्नी प्रत्यारोपण गरिएको छ । गत भदौ २४ गते लडेर देब्रे कम्मरको जोर्नीमा रहेको हड्डीको गेडी भाँचिएको तुलसा थापाको आज सफलरूपमा [...]
“स्तन क्यान्सर आफैँ छामेर परीक्षण गर्न सकिन्छ”
चितवन, ७ असोजः नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाले पत्रकार र परिवारका सदस्यको पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको परीक्षण कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । कार्यक्रमको आज बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा [...]
देशभर सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्यो, आजदेखि नयाँ भाडादर कार्यान्वय
सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कतिमा भयो कारोवार ?
तीन खर्बको आयात हुँदा ४४ अर्बको निर्यात, व्यापार घाटा दुई खर्ब ७० अर्ब, ११८ देशबाट आयात
सामाजिक सञ्जालबाट लोभ देखाएर ठगी गर्ने सन्दीप क्षेत्री पक्राउ
नायिका बेनिसा हमाल र मोडल बिकास लामिछाने फ़िचर्ड रोमान्टिक म्युजिक भिडियो ‘तिमिलाई भेटेदेखि’ सार्वजनिक